Posted by Tranquillus | Jul 4, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Qorshaha horumarinta xirfadaha
Shirkad dooneysa inay horumariso shaqaalaheeda isla markaana ay ku korto kobaceeda. Waxaa lagu salayn karaa qorshaha horumarinta xirfadaha. Kuwani waa ficillo tababar oo dhowr ah oo ay tahay inay haystaan ​​oggolaanshaha loo-shaqeeyaha shaqaalahooda. Diirada saar qaabkan 4-ta ah.
Waa maxay qorshaha horumarinta xirfadaha?
Laga bilaabo Janaayo 1, 2019, qorshaha tababarka wuxuu noqonayaa qorshaha horumarinta xirfadaha. Waxay isu keentaa dhammaan nashaadaadkii tababarka loo shaqeeyaha ee shaqaalaheeda. Sababta oo ah ficilka tababarku wuxuu ku gaadhaa ujeedo xirfad leh, qayb kastaa waxay qiimayn doontaa baahiyaha tababarka ee shaqaalaheeda.
Dhamaadka tababarka, shaqaaluhu waxay yeelan doonaan aqoon cusub iyo aqoon-kororsi. Waxay sidoo kale awoodi doonaan inay cusbooneysiiyaan ama xoojiyaan aqoontooda iyo khibradooda si ay u ilaashadaan booskooda hadda ama mustaqbalkooda.
Horumarinta xirfadaha waxaa lagu samayn karaa tababar shaqsiyeed ama mid kooxeed. Kulamada xirfadeed ee carwooyinka shaqada ama golayaasha ayaa sidoo kale loo qorsheeyay iyada oo qayb ka ah qorshaha horumarinta xirfadaha.
Sameynta qorshaha horumarinta xirfadaha maahan qasab in loo shaqeeyaha, laakiin waxaa si weyn lagula talinayaa. Ficilkan kheyraadka aadanaha wuxuu gacan ka geystaa kobcinta dareenka shaqaalaha ee lahaanshaha. Xaqiiqdii, qof shaqaale ah oo lagu daro qorshaha horumarinta xirfadaha ayaa noqon doona mid wax soo saar leh oo dhiirrigeliya.
Waa kuwee daneeyayaasha qorshaha horumarinta xirfadaha?
Laba dhinac ayaa ka walaacsan qorshaha horumarinta xirfadaha:
Waxay danayn kartaa shirkadaha oo dhan inay yihiin VSE, SME ama warshad. Hirgelinta iyo hirgelinta qorshaha horumarinta xirfadaha waa go'aanka loo shaqeeyaha. Kan dambe dhab ahaantii ma isticmaali karo haddii uusan dareemin baahi.
Dhamaan shaqaalaha, ha ahaadaan maamuleyaal, maareeyayaal ama hawl wadeenno, waxay qayb ka noqon karaan qorshaha horumarinta xirfadaha. Waxay qayb ka tahay heshiiska shaqada ee caadiga ah. Marka shaqaalaha lagu wargaliyo tababarka horumarinta xirfadaha, kan dambe waa inuu yimaadaa. Xusuusnow in xitaa shaqaalaha qandaraasyada waqtiga go'an, ama waqtiyada tijaabada lagu dari karo qorshaha horumarinta xirfadaha. Laakiin waxay kuxirantahay shirkadaha.
Diidmada shaqaaluhu inuu kaqaybqaato tababarka ayaa loo qaddarin karaa inay tahay isbadal-darro taasoo keentay dhaqan xumo xirfad-yaqaanimo. Maqnaanshaha saxda ah ee shaqaalaha inta lagu gudajiray tababarka maxaa yeelay isagu wuxuu ku jiraa fasax jirro, ama fasax ayuu ku jiraa. Dabcan natiijo malahan.
Intaa waxaa sii dheer, haddii shaqaale aan lagu darin qorshaha horumarinta xirfadaha, waxay waydiin karaan inay kaqeybgalaan ka dib wareysi lala yeeshay N + 1 (jaranjarada). Dambe wuxuu caddeyn doonaa baahidiisa waraysi iyo qiimeyn.
Shaqaaluhu wuxuu ilaalin doonaa xuquuqdiisa oo dhan inta uu tababarku socdo. Magdhowgiisa iyo gargaarkiisa wali isma beddelaan. Haddii wax shil ah oo dhacay intii lagu jiray tababarka, tan waxaa loo qaddarin doonaa inay tahay shil shaqo.
Shaqaalaha ka maqnaa muddada tababarka ayaa ka faa'iideysan kara fadhi sixid ah haddii maqnaanshihiisa la cadeeyay. Sida nasashada caafimaad, isbitaal dhigid ama daruuriga qoyska. Fasax, xiitaa haddii la qorsheeyay iyo sidoo kale rukhsadaha gaar ah, qayb kama ahan maqnaanshaha xaq-u-yeelashada tababbarka horumarinta xirfadaha.
Sidee loo dejiyaa qorshaha horumarinta xirfadaha?
Soosaarista qorshaha horumarinta xirfadaha ayaa fududeynaya bixinta tababarka. Hirgalintani waxay ku bilaabataa ogaanshaha baahiyaha tababarka.
READ Talooyin lagu furayo xisaab bangi oo Faransiis ah
Tusaale ahaan: waxaad tahay maamulaha isgaarsiinta, howshaadu waa inaad maamusho isgaarsiinta gudaha iyo dibedda. Waxaad ubaahantahay tababar ku saabsan isgaarsiinta dhijitaalka ah si aad ugu fiicnaato sumcadda shirkaddaada. Haddii mawduuca kugu cusub yahay ama haddii aad leedahay waxyaabo aasaasi ah oo aad wax badan ka baran karto. Waxaad u baahan doontaa tababar ku saabsan isgaarsiinta dhijitaalka ah.
N + 1 wuxuu u gudbiyaa codsiga hogaankiisa qaab dukumenti ah. Waa inay kujirtaa qiimaha lagu daray, saamaynta, iyo muddada tababarka shirkadda. Marka la xaqiijiyo kalasaarka, codsigu wuxuu u gudbi doonaa kheyraadka aadanaha, kaasoo raadin doona bixiyaha adeegga ku habboon ee fulinaya tababarka. Tababarku wuxuu ku dhici karaa gudaha ama dibadda shirkadda. Kharashka waxaa qaadi doona loo shaqeeyaha.
Dhamaadka tababarka, qiimeyn toos ah oo lagu sameeyo guulaha ayaa laguu soo gudbin doonaa. Tani waxay go'aamin doontaa heerka xirfadda aad ku soo baratay berrinka. Intaas waxaa sii dheer, qiimeyn xirfadeed ayaa sidoo kale la sameyn doonaa si loo qiimeeyo natiijooyinkaaga. Tallaabadan waxaa lagu fuliyaa inta lagu jiro xilliyada qiimeynta sida ku xusan kalandarka shirkaddaada. Guud ahaan, qaabdhismeedka qaabaysan waxay fuliyaan qiimeyn xirfadeed rubuc kasta ama laba jeer sanadkii.
Qorshaha horumarinta xirfadaha waa inuu u horseedaa natiijo la taaban karo shirkadda. Aqoonta shaqaalaha ka sokow, qaab dhismeedka waa in, iyo waxyaabo kale, oo ay kordhisay ahamiyaddeeda shabakadaha bulshada.
Sidee loo gartaa in qorshaha horumarinta xirfadaha lagu guuleystay?
Hogaamiyayaal badan ayaan aqoonsanayn waxtarka qorshaha horumarinta xirfadaha. Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha. Qaab dhismeyaasha qaar uma arkaan inay muhiim tahay in loo diro tababaro shaqaalahooda. Waxay u maleynayaan in markay wax bartaan shaqada, xirfadaha ay iyagu iskood u horumarsan doonaan.
Si kastaba ha noqotee, tilmaamayaal waxqabad oo badan ayaa lagu qiyaasi karaa iyada oo la fulinayo ficil tababbarka. Haddii aan tusaale u soo qaadano maamulaha isgaarsiinta oo tababar ku qaatay Maamulka Maamulka Beesha tusaale ahaan. Ka qeybqaataha ayaa lahaan doona dhowr xirfado, sida barashada suuq gaynta gudaha, daraasadaha falanqaynta iyo ku guuleysiga aaladaha dijitaalka ah. Waxyaabaha kale, waxaad dareemi kartaa dhiira gelintaada iyo dareenka lahaanshaha.
Waxa ugu fiican ee la sameeyo si loo helo natiijooyin dhab ah. Waa nooc hore u sii caddeynta kartidaada. Iyo in, wax alla wixii duurka jooga. Haddii, lixda bilood ee soo socota, kaligaa tababar. Abuurista dhammaan noocyada dashbolobolada ku jira Excel. Taasi waa markaa sida ugu dhakhsaha badan ee fursadda kuu soo baxdo ay kuu siiso saaxiibbadaa. Ama maamulahaaga, jaantusyo raad-raac weyn. Way iska cadahay markaad weydiisato tababbarka Excel. Cidna kama shakiyi doono waxtarka tababarkan. Awoodahaaga mar hore ayaa la soo bandhigay. Waxay noqon doontaa uun qaab rasmi ah oo rasmi ah. Suurtagalnimada in aad kordhiso khibradaada.
Qorshaha Horumarinta Xirfadaha: Tillaabooyinka Tababarka Loo-shaqeeyaha loogu talagalay Shaqaalaheeda. Luulyo 2-deedii, 2020Tranquillus
horeMashruuca Kala-guurka Xirfadlaha ah:
socdaCusboonaysiinta dib-u-soo-celinta ama dhiirrigelinta-daraasadda shaqada (Pro-A).
Magdhawga iyo fasaxa umusha